Ukubhanga Kwe-Bitcoin Komphakathi: Izifundo Ezifundwa ku-Bitcoin Beach | Exonumia
# Ukubhanga Kwe-Bitcoin Komphakathi: Izifundo Ezifundwa ku-Bitcoin Beach
Uguquko olukhulu luvamise ukuvuswa yilabo abasebancane kakhulu nabangenalwazi lokuthi baqonde ukuthi loku ebafuna ukukwenza kuzohluleka. Nakuba ngingeke ngikwazi ukucela isizathu zolusha, lapho i-Bitcoin Beach yethulwa, ngiyabonga ukuthi ngangingakachithi isikhathi esanele ku-Twitter ukuze "ngazi" ukuthi i-Bitcoin ngeke isetshenziswe abantu ukuthenga inkomishi yekhofi. Ukube senze ucwaningo oluhlakaniphile noma siqale ngezifundo ezijwayelekile zokungenzeka, besiyobona ubuwula bethu. Siyabonga iningi lenu manje selingakwazi ukuthola i-El Salvador kumephu ngoba besiyiziphukuphuku ukuthi sazi kangcono.
Endabeni ye-Bitcoin Beach, iqiniso livame ukungaziwa kunenganekwane. Akekho owayengacabanga ukuthi umnotho wokuqala we-Bitcoin weqiniso ungathola imvelahpi endaweni encane yasemaphandleni e-El Salvador. Iholwa umhambi osekhulile osasebenzisa i-imeyili ye-Earthlink, esebenzisana nomholi womphakathi osemncane wase- Salvador ongazange aliqede ibanga lesithupha.
Uma sibheka emuva, umphumela wawusobala: inani labantu elilwa nobumpofu nokuntuleka kokufakwa kwezimali lalihlale lihloselwe ukubona ukubaluleka kwe-Bitcoin ngaphambi kwemiphakathi ecebile e-Singapore noma e-Silicon Valley. Kubukeka kufaneleka ngokwaphezulu - labo abavula indlela yokuqala baqale ngokuhlekisayo bengenakufaneleka kangangokuthi awukho umphakathi olandelayo odinga ukwethuka.
E-El Salvador, i-Bitcoin iyimali yabampofu futhi ayibaliwe ngokwezimali. Kubantu base- Salvador abaphila ngobumpofu, izimpikiswano phakathi kwamakhepu emali yedijithali negolide yedijithali zibonakala zixakile, futhi ngaphandle kokuhambisana okungokoqobo. Kulabo abadinga i-Bitcoin kakhulu, kuyindlela abathenga ngayo isinkwa sabo sansuku zonke nokuthi balibulungela kanjani ikusasa. Abasiboni isidingo sokukhetha okukodwa noma okunye.
Ngakho-ke lapha ngo-2021 sibona isizwe esincane esimpofu sibonisa umhlaba ukuthi i- Bitcoin ibhalansa kanjani inkundla yabampofu. Siyazi ukuthi i-Bitcoin Beach iwumbono nje. Kodwa sithemba ukuthi kuzoba yinhlansi evutha umlilo emhlabeni jikelele. Sikumema ukuthi uvakashele i-El Zonte, futhi usisize ukusabalalisa lo mbono womphakathi we-Bitcoin Banking (ukubanga kwe-Bitcoin) ovumela ukufakwa kwezezimali emhlabeni jikelele.
# Ukusuka Kuphrojekthi Yendawo Kuya Kuthenda Elisemthethweni Eminyakeni Emibili
Iphrojekthi ye-Bitcoin Beach iqale ngombuzo olula nokho olangazelelayo: Singakwazi yini ukwakha umnotho oyindilingizi osimeme ku-Bitcoin?
Impendulo inguyebo oqinile. Okwaqala njengephrojekthi yomphakathi edolobheni elikude sekuguquke kwaba yindaba emayelana nabantu abayizigidi eziyisithupha abakhombisa umhlaba ukuthi i-Bitcoin iyimali.
Kulo mhlahlandlela sihlanganisa izifundo eziyisithupha ezifundwe ukuthuthukisa isikhwama se-Bitcoin Beach (Bitcoin Beach Wallet) kanye nengqalasizinda yomthombo ovulekile eyinika amandla. Inhloso yethu ukusiza imiphakathi emhlabeni wonke ukuthi isheshise ukufunda kwayo nokusebenzisa i-Bitcoin kanye ne-Lightning Network (inethiweki esheshayo).
# Iyini i-Bitcoin Beach?
Ogwini lwase-Pacific lwase-El Salvador kuhlezi i-El Zonte, idolobhana elincane lokuntweza emanzini elinabantu abangu-3,000. Izakhamizi zakhona zishiywe ngaphandle ohlelweni lwamabhange olujwayelekile futhi zibhekane nodlame lwamaqembu ezigelekeqe kanye nokuntuleka kokufakwa kwezimali amashumi eminyaka. Kule minyaka eyishumi edlule, iqembu elincane labantu belisebenzela ukuthungela izinguquko futhi libuyisele ithemba ku-El Zonte.
U-Jorge Valenzuela, u-Roman “Chimbera” Martinez noMike Peterson baqale ukuqhuba izinhlelo zentsha cishe ngo-2009 ukuze banikeze izingane ze-El Zonte ithuba lokudlala, ukufunda nokuphupha. Kusuka kukusefa "para todo" (ukusefa kwawo wonke umuntu) kuya kumakilasi ekhompyutha kuya kumaphrojekthi wesevisi yomphakathi akhokhelwayo, izinhlelo ziphefumule amathuba amasha endaweni eyake yazwakala sengathi iphelile.
UJorge, uChimbera kanye nethimba babeke ukuqina, imfundo kanye nomsebenzi womphakathi enkabeni yempilo yansuku zonke e-El Zonte. (Umthombo: Twitter)
Ngo-2019, uMike wathintwa umuntu owayefuna ukusekela izinhlelo zabo ngomnikelo we- Bitcoin. Nokho, kwakukhona okwakuhlosiwe: umnikelo kufanele usetshenziswe emphakathini, esikhundleni sokudayiswa ku-fiat (imali kahulumeni). Umgomo kungaba ukwakha umnotho osimeme oyisiyingi we-Bitcoin lapho abathengisi namalungu omphakathi bengashintshanisa izimpahla, izinsizakalo kanye nomsebenzi ngama-sats. UJorge noMike bamukele inselele, futhi i-Bitcoin Beach yazalwa
Kusukela ekuqaleni, kwaba sobala ukuthi le phrojekthi izokuceda imibono engasiyo ebikade icatshangwa nge-Bitcoin:
I-Bitcoin iyimpahla yokuqagela yabacebile. Uma ulalela iziteshi zezindaba zamabhizinisi namasayithi, uzozwa ingxoxo eqhubekayo mayelana nenani, ukuguquguquka, nokuqhathanisa nezinye izimpahla nokutshalwa kwezimali njengegolide nezitoko. Uzozwa ukuthi amabhange anikezela kanjani ukuchayeka kumakhasimende awo anenani eliphakeme. Ongeke ukuzwe ukuthi i-Bitcoin inika amandla kanjani kwezomnotho kwezinye zezindawo ezimpofu kakhulu emhlabeni.
I-Bitcoin iyisitolo senani, hhayi indlela yokuhwebelana. Nakuba ukusetshenziswa kwe-Bitcoin njengesitolo senani kwamukelwa kabanzi, i-Bitcoin njengendlela yokuhwebelana iyisihloko esiphikisana kakhulu kuze kube namuhla. Isizathu sihamba; "Uma intengo ye- Bitcoin iqhubeka nokukhula ngesilinganiso samanje, akekho ozofuna ukuyisebenzisa ezimpahleni nasensizakalweni."
Njengoba iphrojekthi ishintsha embonweni yaba isenzo, ithimba elikhulayo labaxhumanisi nabafundi be-Bitcoin Beach laqaphela izinkinga i-Bitcoin engazixazulula emphakathini wabo:
Amabhange endabuko awenzi ibhizinisi emiphakathini empofu kakhulu. I-El Salvador isohlelweni lwe-US Dollar kusukela ngo-2001, okwenza umkhakha wabo wezezimali ube ngaphansi kwemithetho yase-US. Izindleko eziphezulu zokuthobela imithetho ezibekwa yile mithetho zenza amabhange angakuniki ukuphakela abantu emazweni ampofu. Isibonelo nje lapho umnikazi weGarten Hotelopen in new window ezama ukumisa abasebenzi ngama-akhawunti asebhange kanye nediphozithi eqondile, wafunda ukuthiopen in new window kuzobiza u-$50 ngenyanga, isisebenzi ngasinye. Lokho kubalelwa ngaphezu kuka-10% wemali engenayo yanyanga zonke yomuntu osebenza ngeholo elincane.
Ukuthola izinkokhelo ze-emittance kubantu base-El Zonte kuyabiza futhi kudla isikhathi. Izinkokhelo ezithunyelwa kwamanye amazwe e-El Salvador zenze u-23% we-GDP yezwe ngo-2020open in new window. Kubiza ngaphezu kuka-$3 ezinkokhelweni ukuze othile athole u-$10 elungeni lomndeni phesheya. Ayikho i-Western Union e-El Zonte ngakho kungathatha amahora nokugibela amabhasi kaningi ukuze izakhamuzi zifike ehhovisi lapho zingathola khona imali ethunyelwayo. Lokhu kungaphezu kwezinsuku engazithatha ukuze imali ifike e- El Salvador isuka kumuntu oqale ukudluliswa.
Kunzima ukonga ngaphandle kokufinyelela ohlelweni lwamabhange. “Ukungabi nebhange" akuvimbeli nje ukuthi umuntu abe ne-akhawunti yasebhange kuphela. Kuphinde kubavimbele ekufinyeleleni uhlobo lokutshalwa kwezimali kanye nezimpahla ezingabavikela ekukhuphukeni kwamandla emali. Umthelela owawungalindelekile wokwethulwa kwe-Bitcoin kwakuyinani labantu abaqala ukonga ingxenye ebonakalayo yeholo labo okokuqala ngqa ezimpilweni zabo.
Ithimba le-Bitcoin Beach lizinikele ekusizeni umphakathi walo uthengiselane ngedijithali ngokusebenzisa i-Bitcoin. (Umthombo: Twitter)
Ukuze iBitcoin ithuthukiswe ukukhula kwephrojekthi yabo, iqembu laqala ngokusebenza. Baqala ukungena emphakathini umuntu oyedwa ngesikhathi kunethiwekhi ye-Bitcoin. Bafunda, bafundisa futhi bazivumelanisa nendlela. Ukufika kwalolu bhubhane ekuqaleni kuka-2020 kwasebenza njengokusheshisa ukwamukelwa kwe-Bitcoin. Izakhamuzi zase-El Zonte ezazidinga ukusekelwa zakwazi ukuthola iminikelo ye-Bitcoin ehlinzekwe yiphrojekthi ye-Bitcoin Beach.
I-athikili ye-Forbesopen in new window yango-2020 yafaka i-Bitcoin Beach endaweni obala futhi yaqala ukuheha ukusekelwa abanye abasebenzisi nabembi be-Bitcoin ababefuna ukusiza. Omunye walaba kwakungu-Nicolas Burtey, umsunguli we-Galoy, ozinikele ukuza e-El Zonte ukuze athuthukise isikhwama semali esifanelana nezidingo ze-Bitcoin Beach. Kungakabiphi, i- Bitcoin Beach Wallet yazalwa futhi iphrojekthi ye-Bitcoin Beach yayikhula ngamandla ekufezeni umbono wayo.
Njengamanje iningi labantu seliyasazi isiphetho sendaba: UMongameli wase-El Salvador uNayib Bukele umemezele ngoJuni 5, 2021 ukuthi i-Bitcoin izoba ithenda esemthethweni ezweni. U-Bukele ulandise kuZinkundla ze-Twitter (Twitter Spaces) ukuthi uhulumeni ugqugquzelwe iphrojekthi ye-Bitcoin Beach nokuthi inhloso yomthetho kwakuwukuphindaphinda okwenzeka e-El Zonte ezweni lonke. Ubalule ngokuqondile ukuthi ukufakwa kwezimali kwamalungu ampofu kakhulu omphakathi waseSalvador kwaba yisisusa esishukumisayo. NgoSepthemba 7 2021, i-La Ley Bitcoin (“uMthetho weBitcoin”) yaqala ukusebenza. I-Bitcoin Beach selokhu yaba yingxenye eyinhloko yendaba yokutholwa kwe-Bitcoin emhlabeni jikelele. Ihehe abantu abemba nabasebenzisa i-Bitcoin abavela emhlabeni wonke abafuna ukubona ukuthi kunjani ukusebenzisa ama-sat ukuthenga ikhofini, ezifundweni ze-sefu, kanye ne-steki. Sekuphinde kwaba yisibonelo sokuthi eminye imiphakathi yenze ngokufanayo.
Okubaluleke kakhulu, i-Bitcoin Beach idale umphakathi lapho izingane zase-El Zonte zingaba namaphipho futhi zakhe ikusasa lazo.
# I-Bitcoin Beach Wallet (Isikwhama se-Bitcoin Beach)
I-Bitcoin Beach Wallet ingumthombo ovulekile wesixazululo sebhange lomphakathi we- Bitcoin. Eyakhelwe ukuhlangabezana nezidingo zabathengisi namalungu omphakathi e-El Zonte. Isebenzisa imodeli yokugcinwa okwabelwana ngayo ngama-multisig enikeza ezinye indlela ezipenene nezitholakalayo.
U-Cristina usebenzisa i-Bitcoin Beach Wallet ukuze athengise izinsipho ezenziwe ngezandla. Amakhasimende angamkhokhela ngegama lomsebenzisi, ngokuskena i-invoyisi ocingweni lwakhe, noma ngokuvakashela ikhasi lakhe le-invoyisi. (Umthombo: Twitter)
Ngaphakathi kwe-Bitcoin Beach Wallet, imali eyinhloko ihlanganiswa futhi iphathwe umphakathi. Lokhu kunikeza izinzuzo kuwo wonke amalungu ngaphakathi komphakathi:
Amashaneli asheshayo aphethwe amalungu; azikho izindleko zokuvula noma ukuvala amashaneli.
Imisebenzi yamahhala nesheshayo ye-intra ledger (ileja langaphakathi) yenziwa itholakale phakathi komphakathi
Ukusebenzisa kahle iziphakeli eziku-inthanethi kuwehlisa izindleko ngomsebenzisi ngamunye uma kuqhathaniswa nokuhlukile kokuthi umthengisi ngamunye abe neseva yakhe.
Izindleko zingancishiswa ngokuhlanganisa imisebenzi ye-on-chain
Izici ezengeziwe kuhlelo lokusebenza zisiza imizamo yokusekela umnotho we-Bitcoin esimeme:
Ikhono lokukhokha ngekheli le-Bitcoin, i-invoyisi esheshayo noma igama lomsebenzisi
Ibhalansi ehlanganisiwe ye-on-chain kanye nokushesha, ebonisa ibhalansi ngama- Dola nama-sats
Ilogi yokuthengiselana ibonisa umlando wezinkokhelo phakathi kwabasebenzisi
Imephu yeselula enobungane ibonisa wonke amabhizinisi endawo amukela izinkokhelo ezisheshayo
Abasebenzisi bekheli lewebhu bangabelana ukuze bathole i-Bitcoin kunoma ubani onesikhwama semali esisheshayo (bona: ln.bitcoinbeach.com/bitcoinbeachopen in new window)
Uma ungathanda ukwakha uhlelo lokusebenza lweselula olungaphambili njenge-Bitcoin Beach Wallet ungafinyelela inqolobane ye-galoy-mobileopen in new window ku-GitHub.
Ngaphandle kokuchitha isikhathi, nazi izifundo eziphezulu uGaloy azifunde ngokwakha e-El Zonte.
# Isifundo sokuthoma: Imfundo Ibalulekile
I-Bitcoin yinto enzima ukuyiqonda. Inqamula isayensi yekhompyutha, ezomnotho, umlando, i-khriphuthographi, inqubomgomo yezimali nokunye. Ngenhlanhla, othile akadingi ukubamba i-Bitcoin ngokugcwele ukuze ayisebenzise futhi azuze kuyo. Bangaki abantu abasebenzise i- fiat impilo yabo yonke abaqonda ngempela ukuthi imali isebenza kanjani?
Ukubonisa abantu be El-Salvador ukuthi isetshenziswa kanjani i-Bitcoin kuyinqubo eqhubekayo ka-Jorge kanye neqembu le-Bitcoin Beach. (Umthombo: Twitter)
Nawa amathiphu amahlanu okufanele uwacabangele lapho ufundisa umphakathi wakho:
Abahleli bomphakathi bangokhiye kunqubo yokwazisa. Ukuba nethimba lokwazisa mathupha kuqinisekisa ukuthi abantu baqala ngendlela elungile. Lokhu kubaluleke kakhulu emiphakathini lapho i-Bitcoin iveza khona ithuba lokusebenzisa idijithali okokuqala ngqa.
Kusebenza kahle kakhulu ukukhombisa abantu indlela yokusebenzisa i-Bitcoin kunokuba ubatshele ngayo. Ukusiza abantu ukuthi badawunilode futhi basebenzisane nesikhwama semali, nokuthi bathumele futhi bamukele ama-sats kusebenza kangcono kunokuzama ukubaphakela ngemibono.
Fundisa izingane. Bazofundisa abazali babo. Izingane ze-El Zonte zashesha ukufunda ukusebenzisa i-Bitcoin. Nabo basiza abazali babo ukuthi bafunde ekhaya.
Ama-ATM e-Bitcoin asiza ukuxhuma amachashazi engqondo phakathi kwe-Bitcoin ne-fiat. I-ATM ye-Bitcoin ibonakale iyimpahla ewusizo enqubweni yokufundisa. Lapho abantu bekwazi ukushintshanisa i-Bitcoin esikhwameni sabo semali yeselula ngemali yabo yasendaweni, bakha ubudlelwano obuqinile nombono we-Bitcoin njengemali.
Siza abantu balindele futhi bahlelele ukuguquguquka kwesikhashana. Setha okulindelekile ukuze umphakathi wakho uzilungiselele ukwehla kwenani le-Bitcoin. Cabangela uhlelo olunxephezela abathengisi ababhalansi ye-akhawunti yehla ngenxa yokuguquguquka kwentengo ngesikhathi sokuqala sokugibela kuze kube yilapho ukunethezeka kwabo nge-Bitcoin sekuqinisekisiwe.
Njengoba wakha umphakathi wakho, zinike isikhathi sokuxhumana nokufunda kubantu base-Bitcoin Beachopen in new window. Bayimidondoshiya ongakwazi ukuma emahlombe abo. Ukuzinikela kwabo enkonzweni bekukhona ngaphambi kwe-Bitcoin, futhi kudlula i-Bitcoin. I-Bitcoin manje isiphenduke indlela abangaletha ngayo ithuba nethemba ngekusasa lase-El Salvador.
# Isifundo sesibili: Umbani uyisisheshi seBitcoin njengeMali
I-Lightning Network (Inethiweki Esheshayo) iyiphrothokholi ebukelwa phansi kakhulu emhlabeni. Eminyakeni emibili nje edlule bekuyindlela #engenangqondo yokwenza. Manje isisetshenziswa ngabakwa-McDonalds, i-Starbucks ne-Pizza Hut e-El Salvador. Ukukhula kwamanodi, namandla okuphatha kwenzeka ngokushesha okukhulu. Umbiko wakamuva we-Arcane Research "Isimo Senethiwekhi Yombaniopen in new window" unikeza amazwibela kwamanye amamethrikhi okukhula nokulindelwe.
I-Bitcoin Beach ekuqaleni yasebenzisa ukuthengiselana kwe-on-chain ukusabalalisa i- Bitcoin emphakathini. Ngenkathi i-on-chain isebenzela izilungiselelo zemfundo futhi idlulisele ama-sats kumalungu omphakathi, ukulinganiselwa kwayo kwaba isithiyo ekuthuthukeleni emnothweni oyindilinga.
Abantu base-Salvador babone ukuthi ukusetshenziswa kwe-Bitcoin njengendlela yokushintshana kunomkhawulo kanjani ngaphandle kwamanethiwekhi amabili afana nombani:
Izindleko ze-on-chain zazimba eqolo ukuze kube lula ukusetshenziswa kwansuku zonke. Izakhamizi zase-El Zonte zidinga ukusebenzisa amadola amancane, njengamasenti angama-50 ama-pupusa (pupusas).
Ukusebenzisa i-Bitcoin ye-on-chain ekuthengiseni okudayisa kudala “uthuli.” I-Bitcoin Beach yazibonela mathupha "inkinga yokuthengiselana ngothuliopen in new window". Imiphumela yokwenziwe engasetshenzisiwe (ama-UTXO) irekhoda ukuthi inani lihanjiswa kanjani kuchungechunge lwesikhathi. Lapho inani le-UTXO liba ngaphansi kwezindleko zokuyisebenzisa, i-Bitcoin ibhekwa njengengenamsebenzi "uthuli".
Esimeni sokuthengisa, noma yini engaphansi kokukhokha ngokushesha kudala ukungezwani kokubili kwebhizinisi nomthengi. I-Bitcoin yakhelwe ukuphepha nokungonakali kungqimba lokuqala. Ayenzelwanga isivinini nokuphuma kokwenziwayo.
Umbani unika amandla izinkokhelo ezisheshayo, ezisebenziseka kalula nezingabizi ezidingwa abathengisi endaweni yokudayisa. (Umthombo: Galoy)
Isendlalelo sesibili se-Lightning Network ubuchwepheshe obungaphakamisa uhlelo lokuthengisa ifa futhi bulethe isithembiso se-Bitcoin njengemali emhlabeni. Abasunguli bethu babhale ngalokhu embhalweni ka-2020 othi "Umbani Njengohlelo Lokukhokha Lokudayisa?open in new window"
I-Lightning Network isebenze njengesisheshisi futhi inike amandla umbono wephrojekthi ye- Bitcoin Beach. Ngaphandle kwayo, ukusebenzisa i-Bitcoin njengemali e-El Salvador kungaba nzima futhi kubize kakhulu; kungenzeka ukuthi iphazamise noma okungenani ibambezele iphrojekthi.
Ukuhlanganiswa kwe-Lightning Network sekuphenduke izigxobo zetafula zanoma yisiphi isikhwama semali noma izinsizakalo zezezimali ezakhiwa ku-Bitcoin. Ivula amathuba amakhulu okuthenga okuseduze-kuya-mahhala, okusemhlabeni wonke, kwesikhathi sangempela, nokungenamvume.
# Isifundo Sesithatu: Ukufundiswa Komthengisi Kuyadingeka Ukuze Kuthuthukiswe Umnotho Wasendaweni Oyindilinga
Ukuma komnotho we-Bitcoin oyindilinga kuveza inkinga "yenkukhu neqanda". Izakhamuzi zidinga izindawo zokuyisebenzisa, futhi abathengisi badinga amakhasimende azozisebenzisa. Ukwenza kube lula futhi kufiseleke ukwamukela i-Bitcoin kuyisinyathelo esibalulekile ekugqugquzeleni ukutholwa komphakathi wendawo.
Umgomo omkhulu uwukwenza ukuthola i-Bitcoin kusheshe, kube lula, futhi kushibhe kunanoma iyiphi enye imali noma izindlela zokukhokha.
UMama Rosa (osesithombeni nendodana yakhe uJorge) wayengumthengisi wokuqala e-El Zonte ukwamukela i-Bitcoin. (Umthombo: Twitter)
Nakhu okunye ukuzizwisa okulolonge indlela esidizayina ngayo abathengisi:
Ungenzi abathengisi bacabange ngokuguqulwa kwemali. Yehlisa umthwalo wengqondo odingekayo ukuze ubale amanani ngokubonisa kokubili amanani edola (noma imali yendawo) kanye namanani we-Bitcoin kuwo wonke amabhalansi, ama-invoyisi nezikrini zomlando wokwenziwe.
Nika amandla izindlela eziningi zokuthi abathengisi bakhokhelwe. Abathengisi akufanele badale ama-invoyisi okwenziwayo ngakunye. Ngokusebenzisa i-Bitcoin Beach Wallet, amakhasimende angakhokha ngegama lomsebenzisi, ikhodi ye-QR ephrintiwe, ekhetha umthengisi kumephu, noma esebenzisa amakhasi we-invoyisi umsebenzisi ngamunye angabelana ngawo kokuthi ln.bitcoinbeach.com/[igama lomsebenzisi].
Yenza inqubo idinge isikhathi esincane, ukunakwa nokuchofoza. Ushintsho lwabathengisi be-El Zonte lufike lapho i-Galoy inika amakhasimende amandla okusetha inani le-invoyisi. Abathengisi akusadingeki bayeke abakwenzayo ukuze bakhe i-invoyisi. Bangavele babheke isixwayiso esisefonini yabo ukuze baqinisekise ukuthi inkokhelo ingenile. I-Bitcoin manje sekulula ukwamukela kunokheshi noma isikweletu.
Dala izikhuthazo zomthengisi ukusiza ukukhuthaza ukutholwa kusenesikhathi. E-El Zonte, kwakukhona uhlelo lwe-“cash back" amasonto ambalwa, lapho abathengisi bathola isiphulelo se-20% ku-Bitcoin yabo. Lolu hlobo lokunyuswa lusiza ukushayela izivivinyo futhi lukhuthaze ukukhula kwangaphambi kwesikhathi komnotho oyindilinga.
Ungalahlekelwa ukugxila endimeni ebalulekile edlalwa abathengisi ekusekeleni umnotho we- Bitcoin. Izidingo zabathengisi kumphakathi ngamunye zizohluka, ngakho-ke qiniseka ukuthi uchitha isikhathi uqonda futhi uziklamele kusenesikhathi.
# Isifundo Sesine: Ulwazi Lomsebenzisi Kufanele Luthuthukiswe Ngaphakathi Kokuqukethwe Komphakathi
I-Bitcoin Beach ikhona emngceleni wokutholwa kwe-Lightning Network. Njengoba uMike evame ukuthi "Kunezingane ezincane e-El Zonte ezenza ukuthengiselana okuningi ukudlula labo abasenalwazi elouningi lwe-Bitcoin (OG Bitcoiners)."
Njengoba umnotho we-Bitcoin ukhula, ithimba laqaphela izidingo ezingafinyeleleki kanye nokusebenza okufiswayo okungasiza ukwenza ukuphila kube lula kubahlali nabathengisi. Ukuba semphakathini e-El Zonte kunikeze ukuqonda okubalulekile kuNicolas njengoba akha i-Bitcoin Beach Wallet.
Ukubuka abantu basebenzisa i-Bitcoin kubathengisi kuyo yonke i-El Zonte kuveze imininingwane ewusizo yokwakhiwa komkhiqizo nesevisi. (Umthombo: Galoy)
Qaphela: Khumbula ukuthi kubalulekile ukuhlola izinhlelo zakho zokusebenza namasevisi ngaphakathi komphakathi ezihloselwe wona. Zenzele olwakho ucwaningo.
Ukufundiwe okuyisithupha komsebenzisi ekuhloleni i-Bitcoin Beach Wallet:
Ungakuthathi kalula uxhumano lwe-inthanethi oluqinile. Ukuthuthukela izindawo ezinoxhumo olunamabala kungase kudinge ukuthuthukiswa nokubekezelela amaphutha kuleveli yenethiwekhi ngokuvamile engeke idingeke e-Melika.
Ukungena kohlelo lokusebenza kuveza iwindi elifanele lemfundo. I-Bitcoin Beach Wallet inombuzo owakhelwe ngaphakathi ohambisa abasebenzisi ngesingeniso esifushane se-Bitcoin. Umbuzo ngamunye uklomelisa umsebenzisi ngama-sats ukuze athome kuhle ekucaleni.
I-Sats iyindinganiso,” kodwa i-USD iseyiyunithi ye-akhawunti. Abantu bacabanga ngemali yabo yendawo, hhayi ama-sats, lapho bethoma ku-Bitcoin. Inguquko yokucabanga ngama-sats ihamba kancane, imali yasendaweni kufanele kube iyunithi ye-akhawunti lapho iletha umphakathi omusha kunethiwekhi.
Engeza ukusebenzisana okuxhumanisa amakhasimende kubathengisi. Ithebhu yemephu ku-Bitcoin Beach Wallet isiza amakhasimende ukuthi athole izindawo lapho angasebenzisa khona i-Bitcoin. Iphinde inikeze amandla okwenziwayo okusheshayo nokulula ngokuvumela ikhasimende ukuthi lidale futhi likhokhe ama-invoyisi.
Amanothi okukhokha asiza ekugcineni amarekhodi. Kokubili amakhasimende nabathengisi bangazuza ngokukwazi ukungeza amanothi kokwenziwe. Ngokusekelwe kokufakwayo komphakathi isici siguqukile sisuka kokuyimfihlo (kuleveli yomsebenzisi) ukuze sabiwe. Manje umthumeli nomamukeli bangakwazi ukubona kokubili inothi elinamathiselwe kumsebenzi.
Hlala unolwazi lokuthi amafomu okukhokha ombani avela kanjani. Amafomethi okukhokha amasha afana nekheli lombani, ama-invoyisi amile kanye ne-BOLT 12 avela ngesivinini esisheshayo. Ukukhetha ukuthi yiziphi izakhiwo ozozisebenzisa kuzoncika esimweni sokusebenzisa. I-Bitcoin Beach Wallet ekuqaleni yethulwe ngekhodi ye-QR ephrintiwe eholela ekhasini le-invoyisi (njenge-ln.bitcoinbeach.com/mamarosa). Amafomethi amasha manje ayacatshangelwa ukuze kwehliswe ukuklwebhana futhi kuthuthukiswe ukusebenzisana.
# Isifundo Sesihlanu: Ukugcinwa Komphakathi Kuyibhuloho lokuzigcina wena ngokwakho
Ukuzigcina kuyisimo esifiselekayo sawo wonke umuntu ophethe ingcebo ku-Bitcoin. Umthetho wokuqala wokugcinwa kwe-Bitcoin uthi "Akuwona okhiye bakho, akuzona izinhlamvu zemali zakho."
Ukuzigcina ngokwakho akuyona ukuphela kwendlela, futhi akuyona indlela efaneleke kakhulu eya emiphakathini esemgwaqweni emcabangweni nasekwenzeni ukusebenzisa i- Bitcoin.
“Kufanele uthathe izinyathelo ezincane. Uma ubeka zonke lezi zingqinamba ekuqaleni, abantu abasoze bangena kumphakathi. " – UMike Peterson ku Tales from the Crypt #173open in new window
# Izigaba zokugcinwa kwe-Bitcoin
Amamodeli okugcinwa kwe-Bitcoin ahlala eduze kwengaba ngokungafani nesigaba esilula / sefihlo. Ngakolunye uhlangothi, une-UX elula, ukufinyelela okulula kwezimali nokuhlanganiswa kuyo yonke i-fiat yasebhange. Ngakolunye uhlangothi, unensimbi egxivizwe ngesandla, imishwana yembewu ehlukanisiwe kanye namamodeli okugcinwa kwamasignesha amaningi adinga izinyathelo eziningi noma abantu abaningi ukuhambisa izimali.
Izimo ezihlukene zokusetshenziswa zinezimo zinobungozi obuhlukene ebenza ukuhwebelana kwamukeleke. Isibonelo, ukugcina ingcebo ku-akhawunti yasebhange ngokuvamile kuthathwa njengokuphephile kunokuhamba nayo njengokheshi esikhwameni, kodwa ukuphatha imali encane uma uthenge nsuku zonke kunikeza lula.
I-Bitcoin Beach Wallet inikeza inketho yokugcinwa okwabelwana ngayo lapho izimali zingagcinwa khona emphakathini.
Yonke imodeli inenani, inqobo nje uma kokuthoma: isetshenziselwa injongo efanelekile futhi kwesibili: iqondisa abantu baye kwesokudla njengoba beqongelela umcebo wabo omningi ku-Bitcoin.
# Ukugcinwa komphakathi: ukukhumbula emuva ezinsukwini zamabhange ezinyunyana
Amabhange omphakathi abekhona emhlabeni wonke amakhulu eminyaka. Inhloso yabo eyinhloko ukusekela izidingo zenhlalo-mnotho zeqembu labantu abanentshisekelo efanayo. Ngokuvamile intshisekelo eyabiwe igxile endaweni. Izimali eziphethwe amabhange omphakathi zitholwa futhi zibolekwe kubantu emphakathini ngendlela eqhutshwa ubudlelwano kunebhange elivamile lomhlaba wonke.
Amabhange omphakathi abaluleke kakhulu emiphakathini efana no-El Zonte ngoba enza ukuthi izinqumo zithathwe endaweni kucatshangwa ngamalunga omphakathi. Isixazululo sebhange se-Galoy se-Bitcoin sakhelwe ukunika amandla noma yimuphi umphakathi noma isikhungo emhlabeni wonke ukuthi sizihlelele ngale ndlela.
Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nokuhlangana phakathi kwe-Bitcoin namabhange omphakathi, bheka umbhalo we-Fulgur Ventures othi “Indima yeBitcoin yamabhange omphakathi” (The role of Bitcoin community banking)open in new window.
# I-Bitcoin Beach Wallet njengebhange lomphakathi le-Bitcoin
Izimali ze-Bitcoin Beach Wallet ziphathwa amalungu ngaphakathi komphakathi, zinikeza izindlela zokukhokha ezingenazingxabano nezingabizi eziklanyelwe ukusekela umnotho wendawo.
Nakhu ukuthi kungani ukugcinwa komphakathi kusebenzela i-Bitcoin Beach:
Ukususa ukungqubuzana kuyisinyathelo esibaluleke kakhulu sokudala imiphumela yenethiwekhi edingekayo ukuze kube nokujikeleza emnothweni. Abantu bayenqaba ngokwemvelo ukushintsha futhi bayashesha ukwenqaba imibono emisha noma babuyele emikhubeni emidala. Njengoba uMike Peterson esho engxoxweni yakhe noMarty Bent ngoJuni 2020: “Kufanele uthathe izinyathelo ezincane. Uma ubeka zonke lezi zingqinamba ekuqaleni, abantu abasoze bangena ku-mphakathi."
Kungaba nzima ukugcina ngokuvikelekile nangokuthembekile imishwana yembewu emiphakathini ephumelele nesafufusa. Kubantu abahlala ezindlini ezinephansi elinobhuqu nezifulelwe ngothayela, azikho izindawo ezivikelekile zokugcina imishwana yembewu ebhaliwe. Ukusebenzisa imishwana yembewu nakho kuveza izinkinga kubantu abangakwazi ukufunda noma ukubhala, okuyinto evamile ezingxenyeni eziningi zomhlaba.
Abantu abasebenzisa i-Bitcoin bakhululeka ngayo ngokuhamba kwesikhathi. Izakhamizi zase-El Zonte manje zithumela i-Bitcoin nge-Lightning Network nsuku zonke. Abanye sebeqalile ukunqwabelanisa ama-sats futhi baqongelele ingcebo engaphezu kwaleyo ababengaba nayo ngamaDola aseMelika. Lona umkhuba okhuthazayo i-Bitcoin Beach ewusekelayo ngemfundo nokuqeqeshwa mayelana nokuzigcina. Ukuthuthukiswa kwe-UX kuzoqhubeka nokwenza ukuzigcina kufinyeleleke kakhudlwana kubasebenzisi abaningi emhlabeni jikelele.
Izixazululo zemithombo evulekile yokugcinwa komphakathi sezivele njengemodeli ebalulekile yokufaka imiphakathi ku-Bitcoin. Sikholelwa ukuthi bazodlala indima ebalulekile ekuletheni i-Bitcoin kubasebenzisi abayizigidi eziyizinkulungwane zokuqala.
# Isifundo Sesithupha: Qala Kancane Futhi Wakhe Umfutho Ngaphambi Kokunweba
Kuyajabulisa ukubona ukwanda kwemiphakathi emhlabeni jikelele isebenza ukuxhuma amadolobha namadolobhakazi kunethiwekhi ye-Bitcoin. I-Bitcoin Lakeopen in new window e-Guatemala kanye ne-Bitcoin Beach Brasilopen in new window yizibonelo ezimbili zakuqala. Abanye abasebenzisi be-Bitcoin baye baqala ukubiza iTonga ngokuthi "Isiqhingi saseBitcoin" ngemva kokuzwa uhlelo lweLord Fusitu’aopen in new window olunezingxenye ezine lokuletha i-Bitcoin ezweni lakhe.
Imfundo yomuntu oyedwa iyingxenye eqhubekayo yenqubo yokufaka umphakathi ku-Bitcoin. (Umthombo: Twitter)
Kulabo abasanda kuqala sizonikeza imibono emibili ebalulekile ekukhuphuleni usuka embonweni uye emnothweni:
Ukuqala ngomphakathi ochaziwe kusiza ukwakha isisekelo esiqinile. I-Bitcoin Beach ihlomule ngokusebenzela umphakathi wezinkulungwane ezintathu owawuhlukaniswe ngokwendawo kwamanye amadolobhana. Lokhu kugxila okuncane kusivumele ukuthi sithwebule futhi sizijwayeze ukufunda ngesikhathi sangempela okusilungiselele ukukhula okunamandla okwalandela.
Ukukhula kwenzeka “kancane kancane, kungazelelwe.” Lapho uletha umphakathi ku- Bitcoin, lindela ukuchitha umzamo nesikhathi esiningi ufundisa abantu bokuqala abangamashumi amahlanu kunenkulungwane elandelayo. Ngenxa yokuthi i-Bitcoin iyinethiwekhi, kuzosebenza imithetho evamile yemiphumela yenethiwekhi. Ngenhlanhla, abathuthukisi be-Bitcoin, othisha nezinkampani emhlabeni jikelele benza amathuluzi ukusiza noma yimuphi umphakathi ukuthi uqalise.
Abantu abaningi baqala ukuzwa nge-Bitcoin Beach ngo-2021, kodwa iphrojekthi isineminyaka eminingi yenziwa. Ithimba le-Bitcoin Beach elizinikele izinkulungwane zamahora lifundisa izinto eziyisisekelo, ukuphendula imibuzo kanye nezinkinga zokuxazulula izinkinga lubaluleke khulu kule phrojekthi. Ngaphandle kwabo, i-Bitcoin Beach ngeke ibe yindaba yempumelelo oyifundayo namuhla.
# Ukucatshangelwa Kokuqala Ibhange le-Bitcoin
Yakha isisekelo esiqinile neqembu elilungile, ubuchwepheshe nokuqeqeshwa.
Ukucatshangelwa Kokuqala Ibhange le-Bitcoin Yakha isisekelo esiqinile neqembu elilungile, ubuchwepheshe nokuqeqeshwa. "Siwumndeni omkhulu onephupho elikhulu." - @romanmartinezc
Hlanganisa iqembu lakho. Khomba abantu abanomoya, isibindi nothando lokuhola umphakathi wakho ngoshintsho lwesistimu olumele i-Bitcoin. Kunama-engeli amabili ayinhloko okufanele acatshangelwe kusukela ekuqaleni:
Ukusebenzelana nomphakathi: Ukuze uqonde ukuthi leli zinga lokuhlela umphakathi libukeka kanjani, vele ulandele futhi ufunde ku-Jorgeopen in new window, Chimberaopen in new window, kanye Mikeopen in new window.
Ubuchwepheshe: Kunezici eziningi okufanele uzicabangele lapho ukhetha izixazululo zobuchwepheshe ongakhela kuzo i-Bitcoin Bank. Ukufinyelela kumuntu ongakuqondisa ngezinqumo eziphathelene nokugcinwa kwe-Bitcoin, indawo yombani kanye nokuphathwa kokushintjheka, ukusetshenziswa kwesikhwama semali esishisayo nesibandayo nezinye izici kuzokusiza ubeke isisekelo esiqinile sokukhula.
Thola umthombo wemali. Ukuthola ukufinyelela kwezimali kuyisinyathelo esibalulekile sokufaka umphakathi omusha ku-Bitcoin, ikakhulukazi emazweni ampofu lapho izakhamuzi zingenayo imali eyongiwe noma imali engenayo. Ukuba nemali yokukhokha ngezinto zokwakha kanye nezinkonzo kuzosiza ukumisa ukusebenza, futhi ukusabalalisa ama-sats phakathi komphakathi ekuqaleni kuzodingeka ukugqugquzela ukujikeleza emnothweni.
Thola isixazululo sezobuchwepheshe. Amathuluzi okuhlinzeka ngezinsizakalo zezezimali ngaphezulu kwe-Bitcoin asavela. Umthombo ovulekile we-Galoy Ingqalasizinda yebhange ye-Bitcoin iyisixazululo esisodwa esihlose ukwenza kube lula emiphakathini nasezikhungweni ukuthi zinikeze izinsizakalo zezezimali nge-Bitcoin kanye nombani.
Chaza imodeli yakho yokugcina futhi uhlele ukusethwa kwamasignesha amaningi (multisig). Ukugcinwa kwezingane kuyisihloko esiyisisekelo esifanele ukunakwa kwemininingwane nokuqonda kwababukeli bakho. Emiphakathini yabasebenzisi be-Bitcoin abanolwazi, kunika amandla ukuzibamba kuyadingeka. Uma ufaka abantu abangabhanganga, ungase unqume ukuthi imodeli yokugcina umphakathi njengaleyo eyenzelwe i-Bitcoin Beach iyisiqalo esifanele. Noma iyiphi indlela, qiniseka ukuthi uhlela ukubamba izimali ezibekiwe ngaphakathi kokusethwa kwama-multisig.
Yenza uhlelo lokuqeqeshwa nokusekelwa komphakathi. Umphakathi we-Bitcoin uphana ngendlela emangalisayo ngezinto zokufundisa nezinye izinsiza, ngakho bheka bese ubuza kuqala. Kungase kube khona indawo engcono kune- "Bitcoin Twitter" ukuze uxhumeke namavidiyo, izindatshana kanye nempahla oyidingayo ukuze uqale ukufaka umphakathi wakho. Khumbula ukuthi ukusetshenziswa kwe-Twitter kungase kube phansi kakhulu emiphakathini oyakhela yona.
Yiya emigwaqeni! Ukufaka umphakathi kwenzeka ngomuntu oyedwa ngesikhathi, ngokuphumela emphakathini futhi anikeze abantu ithuba lokwamukela nokuthumela ama- sats abo okuqala.
Landela u-Jorge (osesithombeni), u-Chimbera noMike Peterson (@@bitcoinbeach) ukuze uhlale uxhumekile ohambweni le-El Zonte.
Kuyakhuthaza ukubona imiphakathi nezikhungo emhlabeni wonke zisebenza ndawonye ukuletha i-Bitcoin kubantu bokuqala abasigidi sezigidi. Sithemba ukuthi lo mhlahlandlela usiza ukusheshisa ukufunda futhi ukhuthaze ingxoxo enhle.
UGaloy uphinde ahlele i-Adopting Bitcoin: A Lightning Summit e-El Salvadoropen in new window ngoNovemba 16 kuya ku 18 njengendlela eyengeziwe yokusekela ukutholwa kwe-Bitcoin nokugubha impumelelo yeqembu le-Bitcoin Beach. Sithobekile ngokuba senkampanini yabantu abafana noJorge, Chimbera, Mike kanye nabanye abangenakubalwa abaphilise umbono womnotho oyindilinga we-Bitcoin.
Uma ungathanda ukubona nokusebenzisa ikhodi yethu, imahhala futhi ingumthombo ovulekile ku-GitHubopen in new window.
Ungakwazi futhi ukufinyelela ku-Twitter @galoymoneyopen in new window kanye ne-Slack yethu yomphakathiopen in new window.